ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - မြန်မာက သံသယလူနာတွေ ဆက်တိုက်သေနေတာ ဘာကြောင့်လဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - မြန်မာက သံသယလူနာတွေ ဆက်တိုက်...
20 มี.ค. 2563 - 18:41 น.
စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ပြီးတော့ မကြာခဏသေတယ်ဆိုတာက (bacterial innfection) မူလရောဂါရဲ့ ဘက်တီးရီးယား ကြောင့် သေတာများပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာလို့ စောင့်ကြည့်ခံရသူတွေထဲကနေ သေဆုံးခဲ့တဲ့အရေအတွက်က မတ်လ ၂၀ရက်နေ့အထိဆိုရင် ၈ ယောက်အထိရှိနေပါပြီ။
အဲဒီလို သေဆုံးတာတွေ ရှိပေမယ့်လည်း မတ်လ ၂၀ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ တယောက်မှ မရှိသေးဘူးလို့လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြု ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
အဲဒီလိုမရှိဘူးလို့ ပြောနေပေမယ့် သံသယလူနာတွေထဲက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမကူးစက်ခံရဘဲ အခုလိုသေဆုံးမှု တွေရှိနေတဲ့အပေါ်လည်း အများပြည်သူက စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
"စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ပြီးတော့ မကြာခဏသေတယ်ဆိုတာက (bacterial infection) မူလရောဂါရဲ့ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် သေတာများပါတယ်။ ဘတ်တီးရီးယားဆိုတာကတော့လဲ ရောဂါပိုးဘဲ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ကတော့လည်း ပိုးပါဘဲ။ ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်ပါတယ်။" လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး ကပြောပါတယ်။
သူတို့သေဆုံးရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကလည်း နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်ပွတာ၊ သွေးဆိပ်တက်တာ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ အစရှိတဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်လို့ ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံလို့ နိုင်ငံကြီးမှာတောင် ရောဂါပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ စွမ်းအားအပြည့်အဝမရှိတဲ့အတွက် သေဆုံး သွားပေမယ့်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကို ရင်ဆိုင် နေရသလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အလားတူ စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးတာ၊ စောင့်ကြည့်ရေး အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာအပြည့်အဝ လုပ်ကိုင်နိုင်တာမျိုး မရှိဘူးလို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ အကြံပေးဖြစ်သူ ဒေါက်တာထူး မောင်အုန်းက ထောက်ပြပါတယ်။
"အမေရိကန်မှာတောင် စစ်နိုင်တာ နည်းတယ်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနေကြတာ၊ အိန္ဒိယမှာလည်း စစ်နိုင်တာ နည်းတယ်၊ နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် တွေ့တဲ့အရေအတွက် နည်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုးပဲ ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင် မမှားဘူး" လို့ သူကပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၈ ဦးထဲမှာတော့ နောက်ဆုံးသေဆုံးတဲ့ ပဲခူးက လူနာ၂ ဦးရဲ့ နမူနာတို့ဖတ် စစ်ဆေးမှုအဖြေကိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက စောင့်ကြည့်လူနာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ရပ်စောက် မြို့နယ်က အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး၊ လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ သံသယလူနာအဖြစ် သတ်မှတ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့က အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ မန္တလေးမြို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံက စောင့်ကြည့်လူနာ ဖြစ်တဲ့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်က အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် နဲ့ ၂၂ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းက အသက် ၇၀ကျော်နဲ့ ၄၀ ကျော် အမျိုးသား၂ဦး အပါအဝင် အားလုံးပေါင်း ၈ဦး သေဆုံး ပြီးပါပြီ။
အသက်ရှုမောကြပ်တဲ့သူ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာခံစားနေရသူ၊ အဆုတ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါမျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေကို အဲဒီလူတွေ တရုတ်နိုင်ငံကို သွားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ မသွားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လို လူမျိုးမဆို အခုလို ခံစားရတဲ့သူတွေကို စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် ထားရှိတာလို့ ဒေါက်တာ ခင်ခင်ကြီးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဒါကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွေအရဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတဦးတယောက်မှ မရှိသေးပေမယ့်လည်း ဗြိတိန်၊ သြစတြေးလျနဲ့ အချို့ ဥရောပ နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံရောက် သူတို့နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အမြန်ဆုံးပြန်လာကြဖို့ ဒီအပတ်အတွင်းမှာဘဲ ပြန်လည်ခေါ်ယူကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုချို့တဲ့ တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုထိတော့ ဥရောပအတွင်း နိုင်ငံပေါင်းအားလုံးနီးပါးကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပြီး၊ ပထမဆုံးစဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံထက်တောင် အီတလီနိုင်ငံက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်က ၃၀၀၀ ကျော်အထိ ရှိလာပြီး ပိုများနေပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ တဦးတယောက်မှမရှိသေးပေမယ့်၊ သံသယအဖြစ်ထားရှိကာ စောင့်ကြည့်ခဲ့သူ ၁၇၅ ဦးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိသူ ၁၅၇ ဦးအထိရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၁၈ ဦးကတော့ စစ်ဆေးဖို့ စောင့်ဆိုင်းသူတွေနဲ့၊ မစစ်ဆေးရသေးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုရှိနေပေမယ့်လည်း မြန်မာအပါအဝင်အခြား ကူးစက်ခံရတာမရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိနေပါသေးတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - မြန်မာက သံသယလူနာတွေ ဆက်တိုက်သေနေတာ ဘာကြောင့်လဲ